WEGHACHITE EHICHAPỤ FAỊLỤ N'IME DATA RECOVERY DATA - NDOZI NA MWEGHACHI - 2019
Weghachite ehichapụ faịlụ n'ime Data Recovery Data
Na-aga n'ihu na-ede banyere free software recovery software, taa m ga-elekwasị anya na otu ihe ndị dị otú ahụ ngwaahịa - Data amamihe Iweghachite. Ka anyị hụ ihe ọ ga-emeli.
Ihe omume ahụ bụ n'efu kpamkpam, ọ nweghị mgbasa ozi (ma e wezụga ịkwasa onye nrụpụta ngwaahịa ya - Cleaner Registry Cleaner) na ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara inwe ohere na diski ike. I nwere ike ibudata ya na saịtị onye mmepụta (jikọta na njedebe nke isiokwu).
Nweghachi ule nyocha na mmemme
N'okwu niile gbasara usoro mgbake data, ana m eji USB flash drive, nke m detuo ụfọdụ foto na akwụkwọ na faịlụ FAT32, ụfọdụ n'ime ha na-agbakọ site na nchekwa, wee kpochapụ ihe niile site na USB flash drive na, n'oge ikpeazu, gbanwee USB flash drive na NTFS .
Nke a apụtaghị na ọnọdụ ahụ siri ike n'ihe banyere ule nke mmemme nchịkọta data, ma ebe ọ bụ na isiokwu ndị ọzọ na-esitekarị maka ndị na-amalite, nchịkọta nke mberede nke flash drive, onye ọkpụkpọ, kaadị ebe nchekwa ma ọ bụ ihichapụ faịlụ dị mkpa bụ mgbe mgbe enwere ule ule a, echere m na ọ bụ ezigbo. (Ọ bụrụ na ịnatabeghị ụdị nsogbu ndị a, ana m akwado isiokwu Data Recovery for Beginners)
Enweghi ike ighota faịlụ
Emere m ihe niile a kọwara n'elu na oge a, nke Amụma Mmasị Data Recovery gwara m na ọ dịghị ihe a chọtara. Agbalịrị m nhọrọ ọzọ - dịka nhazi windo ọkụ, na otu faịlụ faịlụ ahụ - ọzọ 0 chọtara faịlụ.
Ehichapụ faịlụ nwere ike nweta
Naanị naanị faịlụ ndị ehichapụ, usoro ihe omume ahụ nke ọma - ọganihu ọ gbanwere iji weghachite faịlụ ndị a, ha nile wee bụrụ ihe nchekwa na ụda.
Enweghị m ihe ọ bụla iji gbakwunye, nke ahụ bụ ihe anyị nwere na njedebe:
Ọ bụrụ na ị na-ehichapụ faịlụ ma ọ bụ faịlụ na mberede, ị nwere ike ịnwa ịmeghachite ha site na iji Data Recovery
N'ọnọdụ ndị ọzọ, ihe omume ahụ agaghị arụ ọrụ, dịka ọmụmaatụ, usoro Recuva n'efu ga-anagide ọrụ ndị a kọwara n'elu karịa nke ọma.
Enweghị ihe pụrụ iche, dịka ị pụrụ ịhụ, ma na mberede, onye ga-abịa aka. Nbudata nchịkwa data nchịkwa ebe a: http://www.wisecleaner.com/wisedatarecoveryfree.html